Vaovao - Inona no tokony hojerena rehefa mihazakazaka amina milina diesel vaovao
Inona no tokony hojerena tsara rehefa mihazakazaka ao anaty milina mpamokatra gazoala vaovao
Ho an'ny mpamokatra gazoala vaovao, ny faritra rehetra dia faritra vaovao ary tsy mifanaraka amin'ny laoniny ny haavon'ny fanambadiana. Noho izany, ny fihazakazahana amin'ny asany (fantatra ihany koa amin'ny hoe fihazakazahana miasa) dia tsy maintsy tanterahina.
Ny fihazakazahana dia ny fampandehanana ny generator diesel mandritra ny fotoana voafetra ao anatin'ny haingam-pandeha ambany sy ambany, mba hahafahany mihazakazaka tsikelikely eo anelanelan'ny sehatra fampakaram-bady rehetra an'ny generator ary mahazo tsikelikely ny fanjakana mifanentana.
Ny fihazakazahana amin'ny asany dia misy lanjany lehibe amin'ny fahamendrehana sy ny ain'ny mpamokatra gazoala. Ny motera vaovao sy nohavaozina ny mpamokatra mpamokatra gazoala dia efa nozahana sy notiliana alohan'ny nialany tao amin'ilay orinasa, ka tsy ilaina intsony ny fandefasana entana maharitra ela. Na izany aza, ny motera diesel dia mbola mandeha amin'ny fanjakana ihany aloha. dingana fampiasana. Mba hanatsarana ny fihazakazahana amin'ny toetran'ny motera vaovao ary hahalava ny androm-piainany, ireto raharaha manaraka ireto dia tokony hojerena amin'ny fampiasana voalohany ny motera vaovao.
1. Mandritra ny ora fiasana 100h voalohany, ny enta-mavesatra dia tokony fehezina ao anatin'ny elanelan'ny hery nomena isa 3/4.
2. Sorohy ny fisalasalana maharitra.
3. Jereo tsara ny fanaraha-maso ny fiovan'ny masontsivana fandidiana isan-karazany.
4. Zahao foana ny haavon'ny solika sy ny fanovana kalitaon'ny solika. Ny fe-potoana fanovana solika dia tokony hohafohezina amin'ny fiandohana voalohany hisorohana ny fiakanjoana matotra ateraky ny potika vy mifangaro ao anaty menaka. Amin'ny ankapobeny, ny menaka dia tokony ovaina indray mandeha aorian'ny 50 ora fandidiana voalohany.
5. Rehefa ambany noho ny 5 the ny maripana manodidina dia tokony hafanaina ny rano mangatsiaka hampisondrotra ny mari-pana rano ambonin'ny 20 ℃ alohan'ny hanombohana.
Aorian'ny fihazakazahana dia hameno ireto fepetra takiana manaraka ireto ny andiana generator:
Ny singa dia afaka manomboka haingana tsy misy tsiny;
Ny singa dia miasa miadana ao anatin'ny enta-mavesatra naoty tsy misy hafainganam-pandeha sy feo tsy mahazatra;
Rehefa miova tampoka ny enta-mavesatra dia afaka milamina haingana ny hafainganan'ny motera diesel. Tsy manidina na mitsambikina rehefa haingana. Rehefa miadana ny hafainganam-pandeha dia tsy hijanona ny motera ary tsy ho foana ny serivisy. Ny tetezamita eo ambanin'ny fepetra enta-mavesatra samy hafa dia tokony ho malama ary ny loko setroky ny setroka dia tokony ho ara-dalàna;
Ny mari-pana amin'ny rano mangatsiaka dia ara-dalàna, ny enta-mavesatry ny diloilo dia mifanaraka amin'ny fepetra takiana, ary ny mari-pana amin'ireo faritra manosotra rehetra dia ara-dalàna;
Tsy misy famoahana solika, famoahana rano, famoahana rivotra ary famoahana herinaratra.
Fotoana fandefasana: Nov-17-2020
Adiresy: 17F, ny trano faha-4, plaza wusibei Tahoe, làlana 6 Banzhong, distrikan'i Jinan, tanànan'ny Fuzhou, faritanin'i Fujian, Sina